Maherin'ny 20% ny tsindry amin'ny pejin-tranonay dia avy amin'ny endri-javatra iray | Martech Zone
Alakamisy 10 martsa 2016 Alakamisy 10 martsa 2016 Douglas Karr
Nanao sonia an'i Hotjar izahay ary nanao vitsivitsy fitsapana heatmap ao amin'ny pejin-tranonay. Izy ity dia pejy fandraisam-bahiny somary feno miaraka amina faritra, singa ary fampahalalana marobe. Ny tanjonay dia ny tsy hampisavoritaka ny olona - ny hanome pejy voalamina izay ahitan'ny mpitsidika izay tadiaviny.
Saingy tsy hitan'izy ireo izany!
Ahoana no ahalalantsika? Maherin'ny 20% ny fandraisana an-tanana rehetra ao amin'ny pejin-tranonay dia avy aminay fikarohana fikarohana. Ary amin'ny famerenana ny sisan'ny pejinay dia mahalana ny mpitsidika no mikorisa sy mifampiresaka lavitra mankamin'ny pejinay. Ny ankanavaka dia ny mpitsidika marobe no mandeha amin'ny diantsika.
Nampihatra izahay Swiftype ho an'ny serivisy fikarohana anatiny. Izy io dia manome rafitra maoderina mahery vaika, fitaterana tsara, ary manana fiasa tonon-taonina bebe kokoa azontsika ampiharina amin'ny tranokala miaraka aminy.
Na inona na inona hatsaranao nametrahana ny tranokalanao, ny fomba fandaminana ny fivezivezenao, ny mpitsidika dia maniry fanaraha-maso ny zavatra niainany manokana ary maniry fomba fikarohana anatiny lehibe hahitana izay ilaiko. Rehefa miara-miasa amin'ireo orinasa mamoaka tsy tapaka isika, dia ilaina ny fananana rafitra fikarohana matanjaka sy matanjaka. Raha tsy mampiasa a mitady ho serivisy fitaovana, aza hadino ny mampihatra fanaraha-maso fikarohana anatiny ao amin'ny analytics. Rehefa mandeha ny fotoana dia ho azonao ihany koa ny fampahalalana mahafinaritra momba ny lohahevitra tadiavin'ny mpitsidika anao izay tsy namokaranao atiny.
Tags: tsindrio fanadihadianaheatmapan-trano pejylayout pejy fandraisam-bahinyhotjarfikarohana anatinymitady ho serivisySearch Marketingswiftype
Miroborobo manaitaitra ny lisitry ny fiantsenana an-tsena
Mar 19, 2016 ao amin'ny 4: PM PM
Marina izany. Ho an'ny mpamorona dia tsara kokoa ny aseho ho maok manintona ny rohy mpanjifa raha azo atao. Tsy ny mpanjifa foana no manindry ny ampahany "tsara indrindra amin'ny orinasa" amin'ny tranokala www.